Iyo cannabis kambani kubhuroka | Cannabis Gweta | Tom Howard
Anopfuura makore makumi maviri ikozvino kubva California yabvumidza kushandiswa nekutengesa mbanje yekurapa. Mumakore makumi maviri, mamwe makumi matatu nyika dzakasvetukira mubandwagon, uye kushandiswa kwekurapa mbanje kwave kugamuchirwa.
Kuti vatarisire kuwedzera kuri kuramba kuchikwira, mabhizinesi emanje mazhinji akaunzwa munzvimbo dzakasiyana dzenyika. Nekuda kweizvozvo, bhizinesi rembiza rakakura zvakanyanya pamusoro pemakore mashoma apfuura, uye zvigadzirwa zvinosanganisirwa, kusanganisira zvitoro, zvakabata pfungwa dzevashandisi pasi rese.
Ipo indasitiri yembanje iri mari yakawanda, mabhizimusi mashoma akakundikana munguva yakapfuura nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Asi chii chinoitika kana mabhizinesi embanje asina kubudirira? Ivo vane mukana wekusarudza faira rekubhuroka, senge chero rimwe bhizinesi?
Pazasi tinotarisa cannabis kubhuroka, pamwe nesarudzo dziripo kune vanoita mari vane mabhizinesi avo anotadza kuputsa kunyange kana kubudirira.
Imwe yemaitiro akati wandei anowanikwa emabhizinesi inokundikana iko kuikitira kuchengetedzwa kwemabhangi. Nekupa faindi yekubhuroka, mabhizinesi aya haagone kubvisa chikwereti chete, asi zvakare zvinova nyore kuti vagadzirise nekumanikidza kushoma kwemari. Nehurombo, sarudzo iyi haina kuwanikwa kumabhizinesi ari muindasitiri yechiputa.
Parizvino, mabhizinesi emanje haana kukodzera kuchengetedzwa kwemubatanidzwa. Izvi zvinoshanda kunyangwe mumatunhu mune poto zviri pamutemo. Chibvumirano ndechekuti kwenguva yakareba sembanje inoramba iri chinhu chinodzorwa, mabhizinesi ari muindasitiri ino haana kuchengetedzwa nehurumende kana zvasvika pakubhuroka.
Izvi zvinodaro nekuti nyaya dzese dzekubhuroka dzinonzwika mudare remubatanidzwa. Nekudaro, pasi peMutemo wakadzorwa nePfungwa, zvinhu zvembanje zvichiri kunzi chirongwa chandinoshandisa chinodhaka, zvinoreva kuti hazvisi pamutemo kukura, kugovera, kana kuzvinyorera.
Sezvo mutemo wehurumende uchibirira kubhuroka, hazvigoneke kuti US Bankruptcy Trustee iite kana kudzora zvinhu zvinoonekwa zvisiri pamutemo pasina kutyora mutemo.
Kunyange izvi zvichiisa varidzi mune bhizinesi rembanje nenzira isina kunaka, tariro yese haina kurasika. Pane dzimwe nzira dzinoverengeka dziripo yebhizinesi re cannabis haritore sezvo raitarisirwa. Zvinosanganisira:
Iyi sarudzo inosanganisira kushandurwa kwemabhizimusi mari kuita mari, inogona kushandiswa kugadzirisa zvikwereti nevanopa chikwereti. Liquidation ndeyokuzvidira kana yekumanikidza, uye nhanho dzakabatanidzwa mune chero eaya mafomu ekugadzirisa dzakasiyana.
Panyaya yekumanikidzwa kumiswa, dare rinobatanidzwa. Vane zvikwereti vanokumbira dare kuti rimise kambani iyi. Izvi zvinowanzoitika kana vakweretesi vatenda kuti kambani iri mubvunzurudzo haigoni kubhadhara zvikwereti zvayo.
Nekuzvidira insolvency, dare haribatanidzwe. Ndivo vatungamiriri vekambani iyi vanotangisa nzira yekumisa mari pazvinozoonekwa kuti kambani ichave nenguva yakaoma kubhadhara zvikwereti zvayo. Muzhinji, kambani inokwanisa kugadzirisa zvikwereti zvese mushure mekushomerwa.
Pangopera kunyorwa kwemvura, kambani ichave yakanyungudika. Nguva yekunyorwa kwemvura inosiyana zvichienderana nekunetseka kwebhizinesi, pakati pezvimwe zvinhu. Maitiro acho anowanzoda kutora chikamu chehunyanzvi mukudzivirira, iro basa raro guru nderokupa nhungamiro yezviito zvekutora pamatanho akasiyana ezvekugadzirisa basa.
Imwe sarudzo inowanikwa kune avo vari mubhizimusi rehari ndeyekutora. Kugamuchira chinhu chiitiro kuburikidza neicho vanokweretesa vanova varidzi venzvimbo yechikwereti.
Munhu anovimbwa naye kubva mubhizinesi anogadzwa kuti aite seanogamuchira uye kutengesa mbanje zvigadzirwa pasi pemutongo wedare. Maitiro aya anowanzoitika mushure mekunge vanechikwereti uye vanokweretesa vabvumirana pane yakanyanya kunaka nzira yekutora kana watarisana nekubhuroka
Kunyangwe kugashira kusiriwo kwakawanda, kunogona kubatsira vanechikwereti kuti vabude muchikwereti chemari nekukurumidza. Ipo avo vanechikwereti vachirasikirwa nezvinhu zvavo, maitirwo anoita kuti zvikwereti zvikwanise kudzorera mari yavo.
Izvo zvakakosha kuti uzive kuti munhu anogamuchira anoita sekufarira kwaanokweretesa. Izvi hazvireve kuti muridzi webhizinesi haakwanise kupa kutungamira kwavo, kunyanya mune zviitiko zvakakosha zvakadai sekumhanyisa bhizinesi rehari. Kune nzira dzakawanda idzo muridzi webhizinesi anogona kushandiswa kuwedzera kukosha kwenzvimbo yacho uye kuve nechokwadi kuti vese vakweretesi vanoguta panopera basa.
Njodzi dzeMarijuana Bhizinesi
Chokwadi chekuti mabhizinesi muindasitiri ino haakodzeri kufaira kubhuroka kwemubatanidzwa zvinoreva kuti vakweretesi vane hanya yekukwereta chikwereti kwavari. Vanokweretesa masangano vanonyatsoziva kuti kana bhizinesi rikaenda pasi, mukana wekudzosera mari yavo ishoma.
Asi izvo, varidzi vemabhizimusi vanobudirira kuwana zvikwereti kubva kumatareji ekukweretesa vanowanzobhadharwa mibairo yepamusoro kana ichienzaniswa nemamwe mabhizinesi.
Iyi mbanje mbanje inotarisana nedzimwe njodzi dzinofanirwa kuziva nevachemi. Mitemo inodzora kutengeswa kwembanje inoramba ichiitika, uye vanoisa mari vanofanira kuramba vachiwirirana neiyi shanduko. Kana mutemo waputswa munzira yekuita bhizinesi, zviri nyore kwazvo kuti ivo varase marezinesi avo emakambani.
Saka nekudaro, zvakakosha kuti mabhizinesi embanje ashande pamwe nevamiriri vane ruzivo vanogona kupa zano repamutemo nguva uye pazvinenge zvichikodzera.
Nhau dzakanaka, zvakadaro, ndedzekuti indasitiri yemasora iri kuwedzera, zvichireva kuti avo vari kungopinda muindastiri vanogona kubudirira uye nekuwanza kwavo mari mukati menguva pfupi.
Isu tiri kambani yemutemo yakavakirwa muPeoria, Illinois. Ini ndinonzi Attender Thomas Howard. Ini inyanzvi mune ye cannabis indasitiri nyaya dzezvemitemo uye ndinoshanda nechikwata cheanokwanisa magweta ekupa zano repamutemo kune vanoisa mari mubhizinesi rembanje.
Kana yako cannabis bhizinesi yakatarisana nekukwanisa kuitika kwemari sabotage, taura nesu. Isu hatizongopa zano chete asi tinotaurirana zvakare nevako vakweretesi kuti muve nechokwadi chekuti mapato ese ari maviri anotora akanakisa kuita.
Isu tinonzwisisa kuti kushungurudzika kunotarisana nevanokwereta kunogona kuve sei, kunyanya kana uine zvishoma nzira dzekuchengetedza bhizinesi rako. Tinoziva kuti kunyange zvinhu zvicharatidzika kunge zvakaoma, pane nzira yekubuda nayo nguva dzose. Tine timu yenyanzvi inoenda pamusoro pemabhuku ako uye ikubatsire kuita sarudzo ine ruzivo.
Isu takazvitsaurira kuti zviite nyore kwauri kuita bhizinesi uye kugadzirisa matambudziko mazhinji ari mu indasitiri yemanje. Bata neI Illinois based law firm, uye isu tichapa zano rakakosha pamusoro pekuti iwe ungazvibve sei mumatambudziko emari nekumanikidzwa kushoma kubva kune vako vanechikwereti.